I-ECO-IZBA KWIYURE EYI-1 UKUSUKA KWI-MKAD M9 - I-Airbnb
I-ECO-IZBA KWIYURE EYI-1 UKUSUKA KWI-MKAD M9
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguОксана
I-Eco-hut e-Istra yindawo efanelekileyo kwiintsapho ezinabantwana ngaphandle kwesixeko. Indlu yethu ibanzi ngokwaneleyo kwaye kwangaxeshanye ipholile kwaye ishushu. Indlu iya kuhlala ngokukhululekileyo inkampani yabantu abayi-10-15.
Indlu yethu epholileyo yelog ibekwe kufutshane nedolophu yase-Istra engekude ukusuka eMoscow kunye nesikhululo seenqwelomoya iSheremetyevo. Inegumbi kakhulu kwaye ikhululekile kubantu abayi-10-15. Yindawo elungileyo yokuba bobabini babe netheko labucala okanye bachithe iintsuku ezininzi bephuma e-megapolis. Ungaphumla apha ujikelezwe yindalo yomlingo ye-Istra
Indlu ibanzi kakhulu - indawo yokuhlala yi-250 m2. Kumgangatho ophantsi kukho igumbi lokuhlala elinefenitshala, yokwamkela ngokukhululekileyo abantu abangama-20 - 24. Kwakhona kumgangatho osezantsi kukho iwodrophu, ikhitshi, indlu yangasese kunye neveranda. Le ndlu inamagumbi okulala amahlanu, elinye likumgangatho osezantsi namane kwesibini. Onke amagumbi okulala ayilelwe ukuba ahlalise ngokukhululekileyo abantu abadala ababini. Kumgangatho wesibini kukho iveranda, igumbi lokuphumla kunye neholo elinomqeqeshi oyi-elliptical wabathandi bezemidlalo. Kumagumbi amabini okulala kumgangatho wesibini, unokuhlala kakuhle nomntwana, ukuba kukho imfuneko, kukho iibhedi ezongezelelweyo zabantwana kule nto. Asihlawulisi iindawo ezongezelelweyo zabantwana. Ke ngoko, indlu yethu iya kubamba ngovuyo iintsapho ezininzi ezinobuhlobo kwimpelaveki eyonwabisayo okanye ixesha elide lokuzonwabisa ngaphandle. Ngendlela, xa ubhukisha ixesha elide - ngaphezulu kweentsuku ezisixhenxe, sinikezela ngezaphulelo ezinkulu!
Indawo yeyadi yi-1200 m2. Kukho indawo yebarbecue eyadini. Ukunikezelwa kweenkuni ze-coniferous zomlilo ziyafumaneka kwiindwendwe. Kuya kubaluleka kwakhona ukuba iindwendwe zibe neendawo ezininzi zokupaka kwindawo yokupaka eyadini. Iimoto ezimbini okanye ezintathu ezingakumbi zinokumiswa kwindawo yokupaka yeendwendwe ngaphandle kweyadi.
Iyadi inembonakalo yomhlaba enemigangatho emininzi ebeka isithuba. Kukho indawo yemidlalo yeqela okanye i-bonfire kwinduli ejongene neendawo zokukhwela amahashe, kwiindwendwe zethu ezincinci kukho indawo yokudlala kwisilayidi. Ngokubanzi, wonke umntu uya kufumana indawo ayithandayo!
Kubathandi bendalo, ukuthula kunye nokuphumla - indlu ebanzi ejikelezwe yihlathi kunye namasimi acocekileyo. Ukuya ehlathini malunga neemitha ezingamakhulu amathathu, kwifama yehashe - ngaphantsi kweemitha ezingaphantsi kwekhulu, ukuya kwi-reservoir ye-Istra eneelwandle ezixhobileyo - imizuzu emihlanu ngemoto, i-10 ngebhayisikili okanye imizuzu eyi-15 ngeenyawo / 1.5 km /.
Kubantwana - ikhulu leemitha ukusuka kwindlu yethu kukho ifama "Natalya" - ukukhwela i-pony, ifama encinci kunye neebhokhwe, iimvana, onogwaja kunye neenkukhu, thatha izaqathe okanye ii-apula - abantwana bathanda ngokwenene ukondla izilwanyana! Kwakhona kwintsimi yefama iNatalya kukho indawo yokudlala enkulu enezixhobo.
Kubathandi bemisebenzi yangaphandle - ukukhwela ihashe kunye nezifundo zokukhwela, ii-ATVs, imisebenzi yamanzi kwi-Istra reservoir - ulwandle, izikhephe, ii-catamarans, ii-scooters, ukuzonwabisa kwasebusika - iikeyiki zamasi, i-skis, i-skates kwimihlaba enezixhobo. Kwakhona kufutshane kukho i-50 m ichibi lokuqubha elinesauna kunye necandelo labantwana. Ehlotyeni, iibhaluni zihlala ziqokelelana kule ndawo, kwaye kukho i-Helioport eyi-15-20 km kude. Abalandeli beebhaluni, iihelikopta, iipara-plans kunye nedelta-plans bayakuxabisa isithili sase-Istra ngexabiso laso lokwenyani!
Abathandi bembali kunye nenkcubeko-iMonastery eNtsha yaseYerusalem, isikhumbuzo sokwakha, kunye nendawo nje entle. Kwakhona kufuphi ne-monastery kukho i-museum complex enemiboniso eyenzelwe amaqela ahlukeneyo eminyaka ubudala. Kuya kuba nomdla kungekuphela kubantwana, kodwa nakubantu abadala ukutyelela i-museum complex.
Kubathandi besixeko - abo baphoswa ziikhefi, iivenkile kunye neepaki zedolophu nakwiindawo ezisemaphandleni - kukho iindawo ezininzi ezifanelekileyo e-Istra, zombini iiholide zosapho kunye neentlanganiso zeshishini kunye neengokuhlwa zothando.
Abalandeli be-eco-tourism - ecaleni kwendlu yethu kukho iifama ezininzi ezivelisa iimveliso zendalo. Ifama "Natalya" - i-barnyard yoqhagamshelwano, ukukhwela ihashe, iiponi, ii-arena. Intendelezo ye-New Jerusalem Monastery, ifama yobisi yaseBuzharovskaya, kunye neefama ezimbalwa zabucala kunye neemvana zaseRomanov kunye neenkomo.
I-EKO-IZBA yethu ikufuphi nedolophana yaseBuzharovo, kwisithili sase-Istra, kwingingqi yaseMoscow. Ngokuchanekileyo, indawo inokuchazwa ngolu hlobo lulandelayo - indlu ibekwe phakathi kwe-SNT Torlopovo, ilali yaseBuzharovo kunye ne-hamlet yaseLamishino. Eyona ndawo ikufutshane yifama yaseNatalya.